हतियार दुरुपयोगविरुद्धको प्रहरी कारबाही आक्रामक - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रहरीले हतियारको लाइसेन्स लिएर अनियमित धन्दा चलाएकाहरूप्रतिको निगरानी बढाएको छ । एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा सम्हालेयता उपत्यकामा व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि लिएका हतियार नियन्त्रणमा लिने प्रयास सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलखेल गरेर सुरक्षाका हिसाबले विशेष थ्रेट नभएका व्यक्तिहरूले पनि हतियारहरू राख्दै आएका थिए । खासगरी गुन्डा, मिटरब्याजी, मेनपावर व्यवसायीहरू, तस्कर–माफिया मात्र होइन, अन्य शंकास्पद काम गर्दै आएकाहरूलाई पनि चालचलन नबुझी हतियार राख्ने अनुमति दिँदै आएको देखिन्छ ।
स्वयं प्रहरी अधिकारीकै लगानी तथा संरक्षणमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउँदै आएका केही गुन्डाले पनि प्रशासनको इजाजतको भरमा विभिन्न व्यक्तिलाई तर्साउँदै आएका थिए ।
अभियुक्त र अपराधीसँग नै वैधानिक हतियार
सुरक्षा खतरा भएको व्यक्तिलाई जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा मात्रै हातहतियार राख्ने वा प्रयोग गर्ने लाइसेन्स दिइन्छ । हतियार राख्ने लाइसेन्स पाउन उक्त व्यक्तिको चालचलन ठीक भएको, पहिले कुनै फौजदारी अभियोग प्रमाणित नभएको वा नलागेको हुनुपर्छ । अर्थात प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टममा क्लिन देखिनुपर्छ । अझ महŒवपुर्ण कुरा त पहिले क्लिन देखिएर हतियारको लाइसेन्स दिए पनि पछि क्रिमिनल रेकर्ड देखिए त्यस्ता व्यक्तिको हतियार जफत गर्नुपर्छ र त्यो अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । तर पनि केही अभियुक्त र अपराधीले अझै पनि आफूसँग लाइसेन्सवाला हतियार राखिरहेका छन् ।
रेशम चौधरीसँग लाइसेन्सवाला हतियार
एसएसपीसहित सात जनाको हत्या भएको टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकारका रूपमा आरोपित रेशम चौधरीसँग अझै पनि लाइसेन्सवाला हतियार भएको रेकर्ड देखिन्छ । चौधरीले २०६७ चैत ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो नाममा हतियारको नामसारी गराएका छन् । उनले मानपुर–८ दाङ स्थायी घर भई सानोभ¥याङ बस्ने सुमन शाहको नाममा रहेको १२९८४ नम्बरको इजाजतपत्रबाट नामसारी गरी चौधरीले १२९९६ नम्बरको इजाजत प्राप्त गरेका छन् । साबिकको दुर्गौली–९ कैलालीका चौधरीलाई कस्तो प्रकारको सुरक्षा खतरा थियो र उनले किन हतियार किने केही खुलाएइको छैन । यद्यपि, प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा सुमन शाहले चौधरीलाई हतियार बेचेका छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले नामसारीका लागि स्वीकृति दिएको छ । उक्त हत्याकाण्डमा आक्रमणकारीले हतियारको पनि प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । चौधरी यतिबेला पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । तर पनि उनीसँग अझै हतियार रहेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
चार मुद्दाका आरोपीका नाममा स्वचालित हतियार !
साबिकको ताक्लुङ–३ गोरखाका यमबहादुर थापाको नाममा अहिले पनि चारवटा मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रहरीको सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) मा थापाको नाममा २०५७ सालदेखि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको मुद्दा छ । गोरखा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बम पड्काएको र मानिसहरूलाई घाइते बनाई मृत्युसमेत भएको मुद्दा थापाको नाममा अझै जारी छ । तर, २०५७ सालदेखि प्रहरीको रेकर्डमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिएका थापाले २०६८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् । थापाले प्रज्ञा गौचनबाट जर्मनीमा बनेको जीएस फाइभ नामक २२ बोरको स्वचालित हतियार खरिद गरेका थिए । यो हतियार नेपालमा स्वीकृति दिइएको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । यमबहादुर थापा २०७० वैशाख ३ गते बालाजुस्थित आफ्नै डेराबाट पक्राउ परे । थापासँगै एलिशा गुरुङ पनि पक्राउ परिन् । कारण, उनीमाथि अवैध हतियार लुकाएर राखेको आरोप लाग्यो । उनी केही समय पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत गए । तर पछि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर उनी जेलमुक्त भए ।
कुनै समय रिक्साबाट फोहोरमैला संकलन गर्ने अरुण भन्ने थमबहादुर थापा अहिले २० करोडभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिक छन् । अहिले विभिन्न रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ तथा जग्गामा थापाको लगानी रहेको छ । गोंगबुमा नीलकमल दोहोरी साँझ सञ्चालन गरिरहेका थापा गुन्डागर्दी र लुटपाटमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरीसमेत परेको थियो । यद्यपि, त्यो उजुरी भने पछि फिर्ता लिइयो । केही समयअघि दोहोरी साँझमा ग्राहकले पैसाको विषयमा विवाद गरेपछि थापाले लाइसेन्सवाला हतियार देखाउँदै उडाइदिने धम्कीसमेत दिएका थिए । विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए पनि थापाको लाइसेन्सवाला हतियार अझै खोस्न सकिएको छैन । उनी आफ्नो गाडीमा स्वचालित हतियार राखेर हिँडिरहेका छन् ।
मूर्ति तस्कर गुरुङसँग पनि वैधानिक हतियार
साविकको ताकुकोट–७ गोरखा घर भएका तेजबहादुर गुरुङ यतिबेला जेलमै छन् । मूर्ति चोरी र तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले २०६९ असार १० गते गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । सुनको मूर्ति बेच्ने भन्दै कृष्णबहादुर विकसँग ५० लाख लिएका उनले मूर्ति वा पैसा दुवै नदिएपछि विककै जाहेरीमा गुरुङलाई पक्राउ गरियो । अनुसन्धानका क्रममा गुरुङ मूर्तिको तस्करीमा संलग्न रहेको भेटिएपछि उनी यतिबेला थुनामै छन् । गुरुङ थुनामै भए पनि गुरुङको साथमा पनि अझै लाइसेन्सवाला हतियार रहेको तथ्याङ्क छ । गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०६८ चैत १३ गते हतियारको लाइसेन्स लिएका थिए । गुरुङले १२ बोरको बन्दुक र त्यसमा लाग्ने सय थान गोली नामसारी गरी खरिद गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार अझै पनि गुरुङको नाममा हतियार कायम रहेको देखिन्छ ।
गृहसँगै छैन हतियारको तथ्यांक
हातहतियारको लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि नामसारी गर्ने र ल्याउन स्वीकृति दिने काम गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । तर, गृह मन्त्रालयसँग नै देशभर कति हतियारको लाइसेन्स वितरण गरिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । गृह मन्त्रालयसँग कुनकुन व्यक्तिसँग हतियार छ र कहाँ कसरी राखिएको वा प्रयोग भएको छ भन्ने जानकारी नै छैन । प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग यसको तथ्यांक रहेको दाबी गर्छन् । हतियारको लाइसेन्स वितरण भएका सबै जिल्लामा रेकर्ड रहेको भन्दै डिजिटल डाटा भने नभएको उनी बताउँछन् । हतियारको नामसारी वा दर्ता गर्दा व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर नराख्ने गरिएकाले लाइसेन्सवाला व्यक्तिलाई तत्काल सम्पर्क वा पक्राउ गर्न भने समस्या हुने गरेको सुवेदीको तर्क छ ।
काठमाडौंमा मात्र १३ हजार बढी बन्दुकधारी
काठमाडौं जिल्लामा मात्र करिब १३ हजार ३ सय ९० जनाले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेको बताइन्छ । तीमध्ये अधिकांश ‘डन’ र तस्करसँग पनि ‘लाइसेन्सवाला’ हतियार रहेको बुझिएको छ ।
तथापि, सरकारसँग हतियारको वाहक को हो, उनको सम्पर्क नम्बर कति हो र के गर्छन् ? भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । प्रशासन स्रोतका अनुसार कतिपयले ‘सान’का लागि हतियार राखेका छन्, कतिपयले ‘पारिवारिक सम्पत्ति’का रूपमा हतियारको लाइसेन्स र नामसारी गराएका छन् । हतियारको लाइसेन्स लिएकामध्ये केही व्यक्तिको दर्ता खारेज पनि भएको छ । यदि गृह मन्त्रालय वा प्रहरीले कुनै व्यक्तिको नाममा हतियारको लाइसेन्स जारी भएको छ कि छैन भनेर खोज्न खोज्यो भने त्यो तथ्यांक खोज्न महिनौं लाग्न सक्छ । लाइसेन्स लिएर हतियार राख्ने अधिकांशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् । काठमाडौंबाहेक ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ९ सय १६ जनाले हतियार राख्ने लाइसेन्स लिएका छन् । ललितपुरबाट लाइसेन्स लिने ९ सय १६ जनामध्ये केही व्यक्तिले तीनवटासम्म हतियार राखेका छन् । जसका कारण ललितपुरबाट १ हजार १ सय ९८ वटा हतियारलाई लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ । उपत्यकाकै अर्को जिल्ला भक्तपुरबाट भने हालसम्म जम्मा ५० वटा मात्रै हतियारको लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका अनुसार सुरुवातदेखि हालसम्म मात्र ५० वटा हतियारको लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ । कानुनतः लाइसेन्स लिएको भए पनि सार्वजनिक स्थानमा हतियारको प्रदर्शन गर्न पाइँदैन । हतियारको आडमा कसैलाई धम्क्याउन, तर्साउन पनि पाइँदैन । तर गुन्डा, तस्कर, म्यानपावर व्यवसायी र ठेकेदारहरूले लाइसेन्सवाला हतियारको आडमा धम्क्याउने र तर्साउने गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई आतंकित तुल्याउन प्रयोग गरिने गुण्डाहरूकै हतियार यसरी धमाधम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि यतिबेला आफ्ना हतियार पनि कुनबेला खोसिने हो भन्ने डरले थुप्रै गुन्डा, तस्कर–माफिया आतंकित बनेका छन् । नियन्त्रणको क्रम भने जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
मेनपावर व्यवसायी बस्नेत र होटल सञ्चालक पाण्डे त्रसित
प्रहरीको पछिल्लो कदमले सान इन्टरनेसनल ग्रुप प्रालि र एबी इम्प्लोइमेन्ट सोलुसन प्रालिका एकल सञ्चालक अजित भनिने देशभक्त बस्नेत त्रसित भएका छन् । उनले पनि प्रशासनबाट अनुमति लिई आफूसँग हतियार राख्दै त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेको उजुरी परेको थियो । सुरक्षाको गम्भीर थ्रेट भएका व्यक्तिहरूले विशेष प्रयोजनका लागि मात्र लिनुपर्ने हतियारको इजाजत लिएर बस्नेतले दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । बस्नेतले यो हतियारको दुरुपयोग गरी आफ्नो मेनपावर व्यवसाय चलाएको बताइएको छ । बस्नेतले आफ्नो कम्पनीबाट विदेश जाने र विदेशबाट पहिले भनेबमोजिम तलब र काम नपाएर फर्किएकालाई सो हतियारको आडमा धम्क्याएर पीडित बनाइरहेको गुनासो छ । त्यस्तै सांग्रिला होटेलका सञ्चालक प्रसिद्धबहादुर पाण्डेसँग पनि लाइसेन्स रहेको बुझिएको छ । उनले सो हतियारको दुरुपयोग गरेपछि उनलाई समेत पक्रिने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
सहज रूपमा दिइन्छ हतियारको लाइसेन्स
सर्वसाधारण व्यक्तिले हतियार राख्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । सुरुमा हतियार राख्नुपर्ने कारणसहितको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । जुन जिल्लाबाट हतियारको लाइसेन्स लिने हो, त्यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हतियार राख्न पाउनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिएपछि जिल्लामा सुरक्षा समितिको वैठक बस्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिले हतियारको आवश्यकता भएको वा नभएको निर्णय गरेपछि आवश्यक देखिए गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछ । गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिए बल्ल उक्त व्यक्तिले विदेशबाट सोझै हतियार खरिद गर्न सक्छ ।
त्यसबाहेक पहिले नै हतियार ल्याइसकेका व्यक्तिले नामसारी गरेर पनि कुनै व्यक्तिलाई हतियार दिन सक्छ । हतियार लिन चाहने व्यक्तिको चालचलन ठीक रहेको प्रहरी प्रतिवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नामसारीका लागि स्वीकृत दिन सक्छ । त्यसपछि उक्त व्यक्तिले नामसारी गरेर हतियार लिन सक्छ ।
कसकसको लियो अहिलेसम्म प्रहरीले हतियार ?
पछिल्लो समय मिटर व्याजका नाइके हेटौंडा घर भई ललितपुर बस्ने महेश सिंह नामका डनका आधा दर्जन बढी हतियार इजाजत रद्द गरी प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको छ । चार थान राइफल, दुई थान सटगन र त्यसमा लाग्ने सयौं थान गोली प्रहरीले बरामद गरेको हो । यति धेरै हतियार सिंहजस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई राख्ने अनुमति दिनुले प्रशासन कार्यालयको नियतमा समेत प्रश्न उठेको छ । ती हतियार इजाजत लिएकै भरमा मोटो ब्याजदरमा ऋण लिएकाहरूलाई देखाएर उनीहरूको सम्पत्ति हडप्न प्रयोग गरिन्थ्यो । विगत केही वर्षयता बारम्बार सिंहको कर्तुत सार्वजनिक हुँदै आए पनि प्रहरीकै वरिष्ठ अधिकारीको संरक्षण रहेका कारण कसैले ती हतियार कब्जामा लिन सकेका थिएनन्, तर एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले महानगरीय अपराध महाशाखाको कमान्ड सम्हालेयता महेश सिंहका दाह्रानंग्राका रूपमा रहेका ती हतियार फुस्काइएका छन् । महेश सिंह मात्र होइन, प्रहरीले पछिल्लो सयम गुन्डागर्दीमा कुख्याती कमाइसकेका मेनपावर व्यवसायी रघुनाथ पुरी, क्यासिनो किङ बले भन्ने बलराम सापकोटा, मिटर ब्याजका किङ वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र गुन्डा नाइके तथा ठेकेदार आङकाजी शेर्पाका हतियार कब्जामा लिइसकेको छ । यसबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको हतियार पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइएको छ । कुनै समय ‘चरी’ भनिने दिनेश अधिकारीसँगै क्यासिनोमा लगानी गर्ने र चर्को ब्याज असुल्ने सामान्य गुन्डा बलराम सापकोटा पछिल्लो समय ठूलै डन बने । क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउनेहरूलाई रकम लगानी गर्ने र एकदुई महिनामै साँवाबराबर ब्याज उठाउने सापकोटालाई क्यासिनो किङ पनि भन्ने गरिन्छ । पहिले चर्को ब्याज लिने गरी रकम लगानी गर्ने र रकम फिर्ता नगरे हतियार देखाएर आतंकित बनाउने तथा हतियार देखाएरै धम्क्याउने उनको दैनिकी बन्न थाल्यो । लाइसेन्सवाला हतियारको आडमा गुण्डागर्दी गर्न थालेपछि गुण्डागर्दीका कैयौँ शृंखलामा मुछिएका यिनै बलराम सापकोटाको हतियार जफत गर्न केही दिनअघि महानगरीय अपराध महाशाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखिपठायो । सापकोटाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट दर्ता नम्बर १३०६३ बाट २०६८ पुस २७ गते १ सय थान गोलीसहित २२ बोरको बन्दुक एक थान र १२ बोरको बन्दुक एक थान लिएका थिए । तर, उनले लाइसेन्सवाला हतियारको आडमा गुन्डागर्दी गरेको भन्दै उनको हतियार जफत गर्ने निर्णय भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा सापकोटाको साथमा दुईवटा हतियार रहेको भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सापकोटाको साथमा रहेको १२ बोर र २२ बोरको दुईवटै हतियारको दर्ता खारेज गरायो । त्यस्तै, अपराध महाशाखाले बलेको हतियार नियन्त्रणमा लिई दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेकै दिन म्यानपावर व्यवसायी रघुनाथ पुरीको हतियार पनि जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । द रिभर ओभरसिज तथा देवान कन्सल्ट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेड नामक म्यानपावर संस्था चलाइरहेका डाँगीहाट–१ मोरङका पुरीले लाइसेन्सवाला हतियारको आडमा गुन्डागर्दी गरेको प्रहरीको आरोप छ । पुरीले प्रयोग गर्दै आएका इजाजत प्राप्त नम्बर १३१२७ को २२ बोरको बन्दुक र त्यसमा लाग्ने २ सय थान गोली प्रहरीले बरामद ग¥यो । यता उग्रचण्डी–२ काभ्रे स्थायी ठेगाना भएका वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठको देखाउने पेसा जग्गा व्यवसाय हो । तर, उनी मिटर ब्याजीका रूपमा कुख्यात छन् । जुवा खेल्ने र खेलाउने तथा अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई रकम लगानी गरी ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज खाने वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०६७ भदौ १५ गते हतियारको लाइसेन्स लिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट १२७१७ नम्बरको इजाजतमा श्रेष्ठले २२ बोरको बन्दुक र त्यसमा लाग्ने १ सय थान गोली प्रयोग गर्न वैधता लिए । लाइसेन्सवाला हतियार लिएका श्रेष्ठले यही हतियारको आडमा कैयौंपटक धाकधम्की दिँदै गुन्डागर्दी गरेको उजुरी प्रहरीसँग छ । प्रहरी त श्रेष्ठलाई मिटर ब्याजी मात्रै होइन, किलोमिटर ब्याजी नै भन्छ । श्रेष्ठले आफूले पाउनुपर्ने पैसा नपाएको भन्दै पाँचपटकभन्दा बढी उक्त बन्दुकबाट फायर खोलेको पनि प्रहरीको दाबी छ । यता, कुनै समय गुन्डागर्दीमा विख्यात सोलुखुम्बुका आङकाजी शेर्पाको नाममा रहेको हतियार पनि यतिबेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छ । पहिले गुन्डागर्दी गरी राम्रो आम्दानी गरेका शेर्पा पछिल्लो समय ठेक्कापट्टामा सामेल भए । हाल ‘क’ श्रेणीको ठेकेदार बनेका शेर्पाले ४० जिल्लाका विभिन्न ठेक्कामा हात हालेका छन् । ठेक्कापट्टामा गुन्डागर्दी गर्दै आएका शेर्पाले विभिन्न व्यक्तिलाई धम्काएको, ठेक्का हात पार्न हतियारको प्रयोग देखाएको तथा अन्य कुनै व्यक्ति ठेक्का हाल्न जान खोजेमा ‘गोलीले उडाइदिन्छु’ भन्दै रोक्ने काम काजी शेर्पाले गर्दै आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट १३१०८ नम्बरको लाइसेन्स लिएर शेर्पाले हतियार प्रयोग गर्दै आएका थिए । उनलाई सुरक्षा खतरा नभए पनि धम्काउनकै लागि हतियार लिएका थिए । यस्तै, सुन तस्कर भुजुङ गुरुङको पनि हतियारको दर्ता खारेज भएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा मुछिएका अभियुक्त भुजुङ गुरुङको साथमा रहेको दर्ता नम्बर १२२६० को १२ बोरको बन्दुकको पनि दर्ता खारेज गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्यो । गृहको पत्रबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भुजुङ गुरुङको नाममा रहेको हतियारको दर्ता खारेज गरिदियो र यो हतियार यतिबेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छ ।
नामसारीका नाममा हतियारको व्यापक चलखेल
कतिपय व्यक्तिका चालचलन र गतिविधि शंकास्पद देखेमा वा सुरक्षा खतरा महसुस नगरेमा गृह मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई हतियार ल्याउने वा राख्ने अनुमति नदिन पनि सक्छ । गृह मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि यस्ता व्यक्तिहरू हतियारको खोजी गर्दै पहिले नै हतियार लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न पुग्छन् ।
नयाँ हतियार ल्याउन गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिने भए पनि पहिले नै लाइसेन्स प्राप्त हतियारको प्रयोग गर्न नामसारी मात्रै गरे पुग्छ । प्रहरीको चालचलनको रिपोर्ट र डाक्टरले शारीरिक तथा मानसिक अवस्था स्वस्थ रहेको रिपोर्ट दिए त्यस्ता व्यक्तिले सजिलै हतियारको खरिद गर्न सक्छन् । स्थानीय प्रहरी वा राजनीतिज्ञसँग निकट सम्बन्ध बनाई पछिल्ला दिनमा गुन्डा, तस्कर, व्यवसायी र ठेकेदारहरूले वैध हतियारको प्रयोग गर्न थालेका छन् । तैपनि, प्रहरीको यो कारवाहीले भने आशा जगाएको छ ।